India Medical Visa, India - India Visa Online
Visa ara-pitsaboana any India (eVisa ho an'i India ho an'ny tanjona ara-pahasalamana)
Ny antsipiriany rehetra, ny fepetra ary ny takiana izay tokony ho fantatrao momba ny Visa ara-pitsaboana Indiana dia misy eto. Azafady mangataka ity Visa ara-pitsaboana Indiana ity raha tonga hitsabo tena ianao.
Amin'ny maha-marary mitady fitsaboana any amin'ny firenena hafa anao, ny eritreritra farany ao an-tsainao dia tokony ho ny tadivavarana izay tsy maintsy lalovanao mba hahazoana ny Visa-nao amin'ny fitsidihana. Indrindra amin'ny toe-javatra misy vonjy taitra izay maika fitsaboana Ilaina izany fa mety ho sakana ny fitsidihana ny Masoivoho ao amin'io firenena io mba hahazoana ny Visa ahafahanao mitsidika io firenena io amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Izany no antony mahasoa tokoa ny nanoloran'ny Governemanta India fitaovana elektronika na e-Visa natokana ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena ny firenena izay tonga noho ny fikarakarana ara-pahasalamana. Ianao dia afaka mangataka amin'ny Visa Visa ho an'i India an-tserasera fa tsy mila mankany amin'ny Masoivohon'i India eo an-toerana mba hahazoana izany amin'ny fitsidihanao an'i India.
Fangatahana ho an'ny Visa Medical Indiana tsy maintsy atao an-tserasera.
Fepetra takiana ho an'ny Visa ara-pitsaboana any India sy ny faharetan'ny fahaizany:
Nanjary tsotra be ny fahazoana e-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India saingy mba hahafahanao ho mendrika amin'izany dia mila mahafeno fepetra voafetra ianao. Raha mbola mangataka Visa Visa ho an'i India ianao amin'ny maha marary anao dia ho azonao tanteraka izany. Ny Visa Fitsaboana Indiana dia Visa fohy ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana ny mpitsidika ny firenena, noho izany ianao dia afaka mahazo izany raha tsy mikasa ny hijanona mihoatra ny 60 andro amin'ny fotoana iray ianao. Izy io koa dia a Visa fidirana telo, izay midika fa ny tompon'ny Visa ara-pitsaboana Indiana dia afaka miditra in-telo ao amin'ny firenena mandritra ny vanim-potoana maha-marim-pototra azy, izay, voalaza etsy ambony, dia 60 andro. Mety ho Visa fohy izany fa ny Visa Visa ho an'i India dia azo alaina intelo isan-taona ka raha mila miverina any amin'ny firenena ianao amin'ny fitsaboana anao aorian'ny 60 andro voalohany hijanonanao ao amin'ny firenena dia azonao atao ny mangataka izany. in-droa ao anatin'ny herintaona. Ankoatr'ireo fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny Visa ara-pahasalamana ho an'i India dia mila mahafeno ny fepetra takiana amin'ny e-Visa amin'ny ankapobeny koa ianao, ary raha manao izany ianao dia ho afaka hangataka izany.
Fototra azonao ampiharina amin'ny Visa Medical India:
Amin'ny alàlan'ny fitsaboana ihany no ahazoana ny Visa Medical Indiana ary ireo mpandeha iraisampirenena mitsidika ny firenena ihany no azon'ny marary mitady fitsaboana eto. Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana izay maniry ny hiaraka amin'ilay marary dia tsy mahazo miditra amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny e-Visa ara-pitsaboana. Tsy maintsy nangataka ilay antsoina hoe Visa Attendant Visa ho an'i India izy ireo. Ho an'ny tanjona hafa ankoatry ny fitsaboana ara-pahasalamana, toy ny fizahan-tany na orinasa, dia mila mitady ilay e-Visa manokana ho an'ireo tanjona ireo ianao.
Fepetra takiana amin'ny Visa ara-pitsaboana any India:
Ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny fangatahana Visa any India dia mitovy amin'ny an'ny visa e-visa hafa. Anisan'izany ny takelaka elektronika na notarafina tamin'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoron'ny mpitsidika, izay tsy maintsy ilay pasipaoro mahazatra, tsy diplaomatika na karazana pasipaoro hafa, ary tsy maintsy mijanona mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nidirana tao India, raha tsy izany dia mila manavao ny pasipaoronao ianao. Ny fepetra takiana hafa dia ny kopian'ny sarin'ny lokon'ny mpitsidika ny fomba fandefasana pasipaoro, ny adiresy mailaka miasa, ary ny carte de debit na ny carte de crédit amin'ny fandoavana ny sarany fangatahana. Ny fepetra takiana manokana amin'ny Visa ara-pitsaboana Indiana dia kopian'ny taratasy iray avy amin'ny Hopitaly India izay itadiavan'ny mpitsabo fitsaboana (ny taratasy dia tokony hosoratana amin'ny loha-taratasy ofisialin'ny hopitaly) ary ny mpitsidika dia takiana ihany koa hamaly misy fanontaniana momba ny Hopitaly Indianina hotsidihin'izy ireo. Ho takiana aminao ihany koa ny fanananao a tapakila miverina na mandroso ivelan'ny firenena.
Tokony hangataka Visa Visa ho an'ny India farafaharatsiny ianao 4-7 andro mialoha ny sidinao na ny andro nidiranao tao amin'ny firenena. Na dia tsy mitaky anao hitsidika ny Masoivoho Indianina aza ny e-Visa ara-pahasalamana ho an'i India, dia tokony ho azonao antoka fa manana pejy banga roa ny pasipaoronao hofehezin'ny mpiasan'ny fifindra-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina Toy ny e-Visa hafa, ny tompon'ny Visa Medical Indiana dia tokony hiditra ao amin'ny firenena avy any Lahatsoratra momba ny fanaraha-maso ny fifindra-monina izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo miisa 5 ary ny mpihazona dia tsy maintsy mivoaka avy ao amin'ny Poste de Immigration Check izay ekena koa.
Ity ny fampahalalana rehetra momba ny fepetra takiana sy ny fepetra takiana amin'ny Visa ara-pitsaboana Indiana izay tokony ho fantatrao alohan'ny hangataka izany. Fantatra izany rehetra izany, azonao atao ny mangataka mora foana amin'ny Visa Medical ho an'i India izay Forma Fangatahana India Visa dia tsotra sy tsotra ary raha mahafeno ny fepetra takiana ianao ary manana ny zavatra rehetra takiana aminao hangataka izany dia tsy hahita olana ianao amin'ny fampiharana sy fahazoana ny Visa any India. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony Efi-trano fanampiana India Visa ho fanohanana sy fitarihana.
Raha toa ny fahitana maso sy fizahantany ny fitsidihanao dia tsy maintsy mangataka izany ianao Mpizaha mpizaha tany Visa. Raha ho tonga hanao raharaham-barotra na tanjona ara-barotra ianao dia tokony hangataka izany Business Visa.